Iqela likaMarx, uLenin kunye noHo Chi Minh kumtshato we-Engels eIndiya
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseIndiya eziQhekezayo » Iqela likaMarx, uLenin kunye noHo Chi Minh kumtshato we-Engels eIndiya
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • inkcubeko • ukonwatyiswa • Iindaba zefashoni • Iindaba zaseIndiya eziQhekezayo • iintlanganiso • iindaba • abantu • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
Iqela likaMarx, uLenin kunye noHo Chi Minh kumtshato we-Engels eIndiya.
Iqela lamakomanisi lalapha belikhokela kwiphondo laseIndiya elikumazantsi-ntshona eKerala kule minyaka ingama-60 idlulileyo, kwaye lisathandwa kakhulu ngabavoti.
Kwidolophu yaseAthirappilly ngeCawa umyeni, uFriedrich Engels, wazibopha ngeqhina lomtshato nomtshakazi, uBismitha.
Ababekho yayingumninawa kaEngels uLenin, kunye nabahlobo bomyeni, uMarx noHo Chi Minh.
Omane la madoda angamalungu eQela lamaKomanisi laseIndiya.
Kwiphondo laseIndiya elikumazantsi-ntshona eKerala, iqela lamakomanisi lasekuhlaleni belisoloko liphambili kule minyaka ingama-60 idlulileyo, kwaye lisathandwa kakhulu ngabavoti.
Idume kakhulu enyanisweni, kangangokuba abazali baseburhulumenteni bahlala bethiya abantwana babo ngamagama abantu ababalaseleyo kumbutho wamakomanisi.
Umyeni, uFriedrich Engels, ubophe iqhina nomtshakazi, uBismitha. Ababekho yayingumninawa kaEngels uLenin, kunye nabahlobo bomyeni, uMarx noHo Chi Minh.
Ke, xa uMarx, uLenin, kunye noHo Chi Minh behlanganisene emtshatweni Kerala, kunye noFriedrich Engels ehamba phantsi kwendlela, yayingenanto yakwenza nokuhamba kwexesha.
Kwidolophu yaseAthirappilly, umyeni, uFriedrich Engels, isithandi sobulumko saseJamani senkulungwane ye-19 esancedisa ekuqulunqeni iMarxism, wazimanya ngeqhina lomtshato nomtshakazi, uBismitha. Ababebekhona kwakukho nomntakwabo Engels uLenin, owathiywa ngegama lendoda eyayisemva kweRevolution yaseRashiya yowe-1917, kwakunye nabahlobo bomyeni, uMarx noHo Chi Minh, abathwele amagama omseki weMarxism kunye nenkokeli yoguqulo lwaseVietnam ngokulandelelanayo.
Omane la madoda angamalungu eQela lamaKomanisi laseIndiya. Ngenzeka, uMarx ngoku usebenza kwaye uhlala kwi-ultra-capitalist dubai, kodwa wabhabha wabuya ukuze abone umhlobo wakhe etshintshiselana ngezibhambathiso zomtshato nendoda awayemgane nayo, ngokutsho kwamajelo eendaba asekuhlaleni.
Omnye umsitho womtshato owawungoJuni kwilizwana laseTamil Nadu, wabona ubuSoshiyali butshata phambi kwabantakwabo, ubuKomanisi nobuLeninism, kwakunye nomtshana wakhe, iMarxism.